के यो तपाईको छाला टोनका लागि सुरक्षित छ? - कम्पनी समाचार - शेन्जेन नोबल स्मार्ट स्मार्ट कम्पनी टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड
के यो तपाईको छाला टोनका लागि सुरक्षित छ?
किनभने आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने कार्य गर्दछ सबै मेसिनहरू कालो छाला टोनमा सुरक्षित हुँदैनन्। त्यसोभए, सबैभन्दा पहिले तपाईं कुन छालाको टोन हुनुहुन्छ भनेर जाँच गर्नुहोस्।
फिटज्याट्रिक टोन १ देखि।
हामी यो गर्न फिजप्याट्रिक स्केल प्रयोग गर्दछौं। त्यहाँ F फिट्ज़ट्रिक प्रकारहरू छन्, जुन प्रकार I देखि VI मा मापन गरिएको छ। प्रकार I लाई सबैभन्दा हल्का छाला र टाइप छैठो अन्धकार छ।
यहाँ समीक्षा गरिएका सबै घर-प्रयोग उपकरणहरू I देखि IV, प्रकाश देखि मध्य-खैरो छाला टोनका प्रकारका लागि सुरक्षित छन्। केहि थपहरू गाढा छाला माथि V टाइप गर्न सुरक्षित छन् र केही जोडी सबैभन्दा कालो छाला प्रकार VI का लागि सुरक्षित छन्। यसले धेरै कोमल आईपीएलको साथ दोहोरो उर्जाहरू प्रयोग गर्दछ जुन कालो छालाको लागि सुरक्षित छ।
के यसले तपाईंको कपालको रंगमा काम गर्दछ?
होम लेजर र आईपीएलको साथ, तपाईंको कपालको गाढा गाढा राम्रो छ।
गाढा गोरा देखि कालो कपाल
त्यहाँ कालो कपाल बाट गाढा गोरा मा गाढा melanin छ। गहन प्रकाश उर्जाले मेलेनिनलाई लक्षित गर्दछ, यसलाई तातो पार्छ र कपालको फोलिकुललाई असक्षम बनाउँछ। यदि तपाईंको प्राकृतिक कपालको र this्ग यस श्रेणीमा छ भने, सबै घर आईपीएल र लेजर कपाल हटाउने उपकरणहरूबाट छनौट गर्नुहोस्।
हल्का गोरा, रातो र खरानी / सेतो कपाल
निष्पक्ष कपालको साथ (हल्का गोरो, रातो, सेतो वा खैरो), तपाईंसँग गाढा मेलानिन आवश्यक छैन। तपाईंको कपालले प्रकाश उर्जालाई आकर्षण गर्न सक्दैन त्यसैले यो तातो छैन र कपाल जड असक्षम भएको छ। धेरै उपकरणहरूले तपाईका लागि काम गर्दैनन्, जबकि केहिले ती गर्न सक्छन् भन्छन्।
तपाई लेजर र आईपीएल कपाल हटाउनका लागि अनुपयुक्त हुन सक्नुहुन्छ स्वास्थ्य र चिकित्सा कारणहरूको एक समूहको लागि।
तपाईंले खरीद गर्नु अघि प्रयोगकर्ता म्यानुअल पढ्नुहोस्!
यी गर्भावस्था र स्तनपान, मधुमेह, चिकित्सा र छाला अवस्था देखि फोटोसेन्सिटिations्ग औषधिहरू सम्मिलित छन्।
तपाईले यी नियमहरू प्रयोगकर्ता पुस्तिकामा सूचीबद्ध पाउनुहुनेछ। ब्रान्ड वेबसाइटहरूमा जानुहोस्, अधिकतर डाउनलोड गर्न योग्य संस्करणहरू छन्। यदि तपाइँले एउटा फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, ग्राहक समर्थन ईमेल गर्नुहोस् र यसको लागि सोध्नुहोस्। तपाईंले तिनीहरूलाई जाँच नगरेसम्म मेशीन नकिन्नुहोस्!
अघिल्लो: फिल्टर आईपीएल कपाल हटाउने उपकरण को लागी एक सबै भन्दा महत्वपूर्ण तत्व हो
अर्को: नोबल स्मार्ट M7 उपकरणको साथ घरमा आईपीएलको reasons कारणहरू